वास्तु शब्दको अर्थ हुन्छ बस्ने ठाउँ भन्ने हुन्छ । कुनै पनि स्थानको जमिन घरका लागि कति समयको लागि टिक्छ भन्ने कुरा त्यहाँ वनेको घरको आकार र जमिनलाई हेरेर थाहा हुन्छ । अर्थात् घरको ज्यामितिलाई हेरेर थाहा हुन्छ । वास्तु शास्त्रको गहिरो अध्ययन तथा ज्ञान भएका व्यक्तिले कुनै पनि घरको बनावट तथा त्यसको आकार लाई तथा त्यसको ज्यामितिलाई हेरेर त्यो घरमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई के कस्तो रोग छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छन् ।
सकारात्मक ज्यामितिले बनेको घरमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हुन्छ जसले गर्दा त्यस घरका सदस्यहरूमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हुन्छ । उदाहरणका लागि हामी कुनै पनि चिज आकाशमा छोडिदिन्छाैं भने त्यो भुईँमा खस्ने गर्दछ किनकि त्यसलाई गुरुत्वाकर्षणले आफू तर्फ आकर्षण गरेको हुन्छ । यदि हामीले घरमा चारै पट्टी पर्खाल लगाएका छौँ र माथि छत छ भने त्यस घरमा तनाव हुने गर्दछ । अर्थात् घर सही ज्यामितिलाई मध्ये जन गरी बनाइएको छैन भने त्यसले तनाव उत्पन्न गर्दछ । जमिन पनि सकारात्मक र नकारात्मक ऊर्जा भएको हुने गर्दछ ।
तसर्थ घर बनाउनु भन्दा पहिले जमिन कस्तो छ भनेर जान्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि वास्तु अनुसार जमिनको परीक्षण वा जमिनमा वास्तु अनुसार कस्तो किसिमको ऊर्जा छ भनेर परीक्षण नगरीकन घर बनाउँदा त्यसले जीवनमा नकारात्मक परिणाम निम्त्याउन सक्छ । जस्तो कि घर भासिने, बाढी पैरो जाने, परिवारमा तनाव तथा नकारात्मक असरहरू देखिने हुन्छन् । यदि तपाइले जमिनको परीक्षण नगरी घर बनाउनुहुन्छ भने घरमा अनेक कलह झगडा हुने गर्दछ । यदि सकारात्मक भूमि छ भने सकारात्मकता फैलाउने गर्दछ । सकारात्मकता हुने बित्तिकै घरमा धन प्राप्त हुन थाल्दछ, काम गर्ने ऊर्जा आउँछ । जसले काम गर्दछ उसले फल पाउँदछ ।
घरका लागि उपयुक्त जमिन कसरी थाहा पाउने ?
१. पहिलो तरिका
यदि तपाइले घरका लागि जमिन खरिद गरिसक्नुभएको छ भने त्यसको अवस्था र त्यसमा रहेको सकारात्मक वा नकारात्मक ऊर्जाको अवस्था परीक्षण गरेर मात्र घर बनाउन उपयुक्त हुन्छ । अथवा तपाइ कुनै जमिन किन्दै हुनुहुन्छ भने पहिला जमिनको परीक्षण गरेर मात्र किन्नुहोस् त्यसका लागि तपाइ स्वयमले परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसका लागि सर्व प्रथम तपाइले तपाइले किन्दै गरेको जमिनमा एक हात लम्बाइ एक हात चौडाइ र एक हात गहिराइ भएको खाल्डो खन्नुहोस् । अब त्यो खनेको माटो पुनः खाडलमा राखेर पुर्नुहोस् । यसरी माटो खाडलमा राखेर पुर्दा माटो केही मात्रामा बचेको छ भने मान्नुहोस् कि त्यो जमिन घर निर्माणका लागि उपयुक्त छ । खाल्डोमा माटो बराबर भयो भने त्यो मध्यम किसिमको घडेरी हो । यदि माटो खाल्डो भन्दा कम भयो भने त्यो जग्गा घरका लागि अनुपयुक्त हुन्छ अर्थात् त्यो जमिन अधम भूमि हो । खाल्डो पुरेर बचेको जमिनको माटो खदिंलो छ भने त्यो जमिन बस्नका लागि सर्वोत्कृष्ट हुन्छ ।
२. दोस्रो तरिका
यस विधि पनि तपाइ स्वयमले जमिनको परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ । माथिको विधिमा जस्तै पहिला १ हात लम्बाइ, १ हात चौडा र १ हात गहिराइ भएको खाडल खन्नुहोस् र त्यस खाल्डो पानीले भर्नुहोस् । अब तपाइ त्यो खाल्डो देखि उत्तर तर्फ १०० पाइला गनेर हिँड्नुहोस् र फेरी फर्केर खाडल भएको ठाउँमा आउनुहोस् र खाडलमा भएको पानीको अवस्था जाँच गर्नुहोस् । यदि खाडलमा पानीको मात्रा घटेको छैन भने त्यो जमिन घरका लागि सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ । यदि पानी घटेर आधा भएको छ भने त्यो जमिन मध्यम खालको मानिन्छ । त्यस्तै खाडलमा पानी घटेर एकदमै कम भएको छ भने त्यो जमिन उत्तम मानिँदैन अर्थात् त्यो भूमि अधम हो, त्यस भूमिमा नकारात्मक ऊर्जा हुन्छ त्यहाँ बस्नु उपयुक्त हुँदैन।
३. तेस्रो तरिका
जुन भूमिमा तपाइ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यस भूमिका खन्दा, कोइला, फलाम, कपाल, हड्डी, भूस आदि भेटिन्छ भने त्यो एकदमै नकारात्मक भूमि हो । यस किसिमका भूमिमा बसोबास गर्दा रोगको वृद्धि हुने गर्दछ ।घरको जग खन्दा सग्लो इँटा वा ढुङ्गा भेटिन्छ भने त्यो जमिन उत्तम मानिन्छ ।
४. चौथो तरिका
यदि जमिनको सतह पूर्व, ईशान र उत्तर दिशामा कोल्टिएको छ थोरै ओरालो छ भने त्यस किसिमको जमिन बसोबासका लागि एकदमै उत्तम हुन्छ । अर्थात् सम्पूर्ण दृष्टिकोणबाट उत्तम हुन्छ त्यस्तो भूमिमा बस्दा एकदमै लाभ प्राप्त हुन्छ । यदि नैऋृत्य, पश्चिम, वायव्य र बिचमा खाल्डो छ, थोरै उँधो झुकेको जमिन छ भने त्यस्तो किसिमको जमिन नराम्रो र नकारात्मक ऊर्जा भएको जमिन मानिन्छ । दक्षिण र आग्नेय , उत्तर र वायव्य दिशामा उँचा जमिन छ भने डाँडो जमिन छ भने त्यस्तो जमिन रोगको कारक मानिन्छ ।
५. पाचाैं तरिका
यस तरिकमा जमिनको माटोको सुगन्ध सुँघेर माटोको परीक्षण गरिन्छ । यदि जमिनको माटोलाई सुँघ्दा राम्रो सुगन्ध छ भने त्यो जमिन राम्रो मानिन्छ । यदि सुगन्ध नराम्रो छ भने त्यो जमिन नराम्रो मानिन्छ ।
६. छैटौँ तरिका
यस तरिकामा तपाइ रुद्राक्षको मालाको प्रयोग गरेर माटोको अवस्था परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ । सर्वप्रथम थोरै माटो खनेर सफा बनाउनुहोस् त्यसपछि रुद्राक्षको माला लिई सुमेरु अर्थात् मालाको फुर्कामा समाउनुहोस्। अनि जमिनको माटो माथि राख्नुहोस्, यदि मालाको फेद दाइने घुम्छ भने त्यो जमिन सकारात्मक ऊर्जा भएको जमिन हो । यदि माला उल्टो अर्थात् देब्रे घुम्छ भने त्यो नकारात्मक भूमि हो । घरको आग्नेय दिशामा कहिले पनि बर पिपलको बोट रोप्नु हुँदैन । जुन घरमा कोला, अनार, पिपल र निम्बू आदि घरको छेवैमा रोपिएका छन् भने त्यो घरमा कहिल्यै पनि श्री वृद्धि हुँदैन । यस्ता वृक्षहरू घरको छेउमा राम्रो हुँदैन । छेउमा भएको निम्बूले घरमा नकारात्मक ऊर्जा ल्याउँछ ।
माथि उल्लेख गरिएका उपायहरू तपाइ स्वयम प्रयोग गरी वास्तु अनुरूपका जमिन छ छैन भनी परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ । जीवनमा एक पटक बनाउने घरमा वास्तु लाई ध्यानमा राखी निर्माण गर्दा त्यसले जीवनमा सकारात्मक ऊर्जा ल्याउँछ र श्री वृद्धि गर्दछ । त्यसका लागि घर बनाउनु अघि माथि उल्लेख गरेका उपायहरू अपनाइ वा नजिकका वास्तु विज्ञको सल्लाह बमोजिम घर बनाउनु नै उत्तम हुन्छ ।
अक्सर मानिसहरू घर निर्माण गर्दा द्विविधामा हुन्छन् कि घरको वालमा इँटा या ब्लकको प्रयोग गर्ने । तपाइ पनि घर निर्माण गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ र घरको वालको विकल्प खोज्नु भएको छ भने आज यस लेखमा हामी तपाईँलाई वालको विकल्प मध्ये ACC block र इँटाको बारेमा जानकारी गराउँदै छौँ । त्यसकालागि तपाइले यो लेख पढ्नुपर्ने हुन्छ ।
ACC Blockको पुरा रूप Autoclaved Aerated Concreate Block हुन्छ । यो हलुङ्गो हुने भएकाले यसलाई उठाउन धेरै सजिलो हुन्छ । अर्थात् यसको आयतन धेरै तथा तौल कम हुन्छ । यसको आयाम ६००mm X २५०mm X१५०mm हुन्छ । सामान्यतया एक एसीसी ब्लकको तौल १४.२० केजी हुन्छ । यही आयतनमा इँटा सँग तुलना गर्ने हो भने इँटा ८ वटा इँटा पर्न जान्छ र तौल करिब ३५ के.जी हुन जान्छ । यसरी हेर्दा ब्लकको तौल भन्दा इँटाको तौल २ गुन बढी हुन जान्छ । यसले गर्दा हामीले निर्माण गर्ने संरचनाको भार इँटाको भन्दा २ गुना कम हुन आउँछ । यो आफ्नो हल्का वजनको कारण पानीमा डुब्दैन र यो पानीको सतहमा तैरिन्छ। जबकि इँटालाई पानीमा राख्दा पानीमा डुब्दछ ।
लागत खर्चको हिसाब हेर्ने हो भने पनि इँटा जडानमा लाग्ने जनशक्ति भन्दा ACC ब्लकमा लाग्ने खर्च लाग्ने हुन्छ । १०X१० फिटको वालमा ५० वटा ब्लक आवश्यक पर्दछ भने इँटामा ५८५ ब्लक लाग्दछ । जोइन्टको सङ्ख्या हेर्ने हो भने ACC ब्लकमा १६२ जोइन्ट र १ बोरा सिमेन्ट लाग्दछ । त्यस्तै इँटमा १६५६ जाोइन्ट र २ बोरा सिमेन्ट लाग्दछ । यसरी हेर्दा ACC ब्लक प्रयोग गरी घर बनाउँदा धेरै मूल्य कम पर्न जान्छ ।
अब तपाईँलाई अर्को प्रश्न उठ्न सक्दछ कि ACC ब्लकमा बिजुली र पानीको वाइरिङ्गका लागि कति उपयुक्त र सहज हुन्छ ? अवश्य पनि, ACC block सजिलै काट्न सकिन्छ जसले गर्दा वायरिङ र पाइप फिटिङ्गको काम गर्न कम समय लाग्दछ । जबकि रातो इँटा धेरै कडा भएकाले काट्न बढी समय लाग्ने , भित्ता पनि चर्कन तथा भत्कन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
ACC Block को साइज उत्पादन गर्ने कम्पनी अनुसार फरक फरक हुन जान्छ । तथापि सामान्य तया यसको साइज निम्नानुसारको हुने गर्दछ ।
६००mm X २००mm X १००mm
६००mm X २००mm X १५०mm
६००mm X २००mm X २००mm
६००mm X २००mm X २५०mm
२३०mm X १००mm X ७५mm
ACC Block को comprehensive strength 5n/mm2 हुन्छ भने इँटको 3.50n/mm2 हुन्छ । यसको अर्थ यो हो कि ACC block इँटको तुलनामा धेरै बलियो हुन्छ । त्यस्तै ACC ब्लकको आगो प्रतिरोधी क्षमता ४ घण्टाको हुन्छ भने इँटाको २ घण्टा मात्र हुन्छ ।
अन्त्यमा भन्नु पर्दा ACC block त्यस्तो स्थानमा प्रयोग गर्नु पर्दछ जहाँ ठुला ठुला गगनचुम्बी भवनहरू निर्माण गरिन्छ । किनकि यसले भवनको कुल भार कम गराउँदछ । इँट जुनसुकै निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तपाइले ACC block प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने यसलाई कुनै संरचनाको फाउन्डेसन वाल र प्लसटर गरी ड्याम प्रुफ गर्ने स्थानमा प्रयोग गर्न सकिँदैन ।
घर निर्माणका लागि कुन सिमेन्ट उत्तम ? पिपिसि या ओपिसि
बजारमा घर निर्माणकालागि दुइ प्रकारका पिपिसि. र ओपिसि सिमेन्ट उपलब्ध छन् । तपाइ घर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ र कुन अवस्थामा कस्ताे प्रकारको सिमेन्ट प्रयोग गर्ने भन्ने जानकारी छैन भने अाज हामि तपाइलाइ यसबारे वृहद् जानकारी दिंदै छाैं । त्यसकालागि तपाइ यस ब्लगलाइ अन्तिम सम्म पढ्नुपर्ने हुन्छ ।
ओ.पि.सि. पुरा नाम अर्डिनरी पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट हो । यसको प्रारंभिक शक्ति पीपीसी भन्दा उच्च हुन्छ । हाइड्रेशन प्रतिक्रियामा पीपीसी भन्दा बढी तातो उत्पन्न गर्दछ जसले यसलाई ठूलो कास्टिंगको लागि कम उपयुक्त बनाउँदछ। योआक्रामक मौसममा कम टिकाऊ हुन्छ । यसको बजार मुल्य पीपीसी भन्दा महँगो। उत्पादन प्रक्रियाको क्रममा CO2 उत्पन्न गर्दछ। यो त्यस्तो स्थानमा उपयुक्त छ जहाँ द्रुत निर्माण आवश्यक छ तर माथि उल्लेख गरिए अनुसार गर्मी वा बढी तातोको कारण ठूलो कास्टिंगको लागि उपयुक्त हुँदैन। यसको प्रारम्भिक सेटिंग समय ३० मिनेट र अन्तिम सेटिंग समय २८० मिनेट हो। यसको फाइनल सेटिङ समय १२ दिनको हुन्छ तसर्थ यसको द्रुत सेटिंग समयले छिटो निर्माणमा मद्दत गर्दछ।
ओपिसि सिमेन्ट २२5 वर्ग मिटर / किलोग्राम फिनिटनेस हुन्छ। त्ययसकारण यो सिमेन्ट PPC भन्दा कम राम्रो राम्रो हुन्छ। त्यसैले यो सिमेन्टमा प्रारम्भीक शक्ति र न्यून टिकाऊपन। बजारमा ३३ ग्रेड, 43 ग्रेड, र 53 ग्रेडमा ओपीसी सिमेन्ट उपलब्ध छन्। समग्रमा यसको कार्यक्षमता पीपीसी भन्दा कम हुन्छ । यसको क्षार, सल्फेट्स, क्लोराइडहरू आदि बिरूद्ध कम प्रतिरोध हुन्छ।
पि.पि.सि.को पुरा रूप पोर्टल्याण्ड पोजोलोना सिमेन्ट हुन्छ । पिपिसि सिमेन्टमा ओपीसी सिमेन्टको पोजोलानिक सामग्री थपेर तयार गरिएको हुन्छ । जसमा क्याल्सिन्ड माटो, ज्वालामुखी खरानी, फ्लाई खरानी वा सिलिका धुवाँ समावेश गरि निर्माण गरिएको हुन्छ। यसमा ढिलो हाइड्रेसन प्रक्रिया हुन्छ र यसले ओपीसी भन्दा कम तातो उत्पन्न गर्दछ। पि.पि.सि सिमेन्ट आक्रामक मौसममा अधिक टिकाऊ हुन्छ। यसको मुल्य ओपिसि सिमेन्ट भन्दा कम मुल्यमा उपलब्ध हुन्छ । ओपिसि. सिमेन्टको तुलनामा यो सिमेन्ट वातावरण मैत्री हुन्छ । यो सबै प्रकारका निर्माण कार्यको लागि उपयुक्त छ। जस्तो कि भवनहरूको अार.सी.सी. ढलान, पुलहरूको लागि सामूहिक कन्ट्रेटिंग , प्लास्टरिङ र अन्य गैर-संरचनात्मक कार्यहरू। सेटिङ हुने समय ओपिसि सिमनेन्टको तुलनामा धेरै समय लाग्ने हुन्छ । यसको प्रारम्भिक सेटिंग समय ३० मिनेट र अन्तिम सेटिंग समय ६०० मिनेट हो। यसको ढिलो सेटिंग समयले अझ राम्रो बनाउन मद्दत गर्दछ।
यसको फाइनल सेटिङ समय २५ दिनको हुन्छ ।ओपीसी सिमेन्ट ३०० वर्गमीटर / किलोग्रामको फिटनेस छ। त्यसकारण यो ओपीसी भन्दा राम्रो हुन्छ। पीपीसी सीमेन्टको निर्दिष्ट ग्रेड उपलब्ध छैन। यसमा अल्कालिस, सल्फेट्स, क्लोराइडहरू आदि बिरूद्ध उच्च प्रतिरोध हुन्छ।
अव प्रश्न उठ्न सक्छ कि कुन कुन स्थानमा ओपिसि सिमेन्ट प्रयोग गर्ने ? यो घरको विम, कोलम, स्लाब, इन्डस्ट्रियल कम्पलेक्स, बाटोको पुल, अग्ला भवन अादिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै गरी पिपिसि सिमेन्ट इटा तथा वाल जडान, प्लास्टरिङ, टायलिङ, वाटर प्रुफिङका, साना तथा मझाैला साइजका घर लागि उपयुक्त मानिन्छ ।
के तपाइ घर बनाउदै हुनुहुन्छ ? कस्तो ठाउँमा टाइल, मार्वल र ग्रिनाइड लगाउने भन्नेबारे अलमलमा हुनुहुन्छ ?
के तपाइ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ र घरको भुईँमा टाइल, मार्बल र ग्रिनाइड के लगाउने भन्ने बारेमा दुबिधामा हुनुहुन्छ ? आउनुहोस् आज तपाईँलाई हामी यी तिन मध्ये तपाइको घरको कुन स्थानको भुईँमा के लगाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न मद्दत गर्नेछौँ ।
सबैभन्दा पहिला हामी ग्रिनाइडको बारेमा चर्चा गरौँ । ग्रिनाइड एउटा कडा र लामो समय सम्म टिक्ने पत्थर हो । साधारण तया यसको कडापन नाप्नको लागि Mohs Hardness Scale प्रयोग गरिन्छ । यसमा कडापनको मात्रा मापन गर्न १ देखि १० सम्मका अङ्क रहेको हुन्छ र यस स्केलद्वारा कुनै पनि चिजको कडापन मापन गरिन्छ । यस स्केलमा तल्लो अङ्क १ ले कुनै पनि बस्तुको तल्लो कडापन र १० अङ्कले सबैभन्दा बढी कडापन भन्ने जनाउँदछ । यो मोह स्केलमा ग्रिनाइडको मापन अङ्क ७ हुन्छ भने डायमन्डको १० अङ्क हुन्छ । त्यसैले तपाइहरू सबैलाई पक्कै पनि थाहा हुनु पर्छ कि डायमन्ड सबैभन्दा कडा पत्थर हो । यसै बाट थाहा हुन्छ कि ग्रिनाइड कत्तिको कडा हुन्छ ।
अब तपाईँलाई थाहा भयो कि ग्रिनाइड कति कडा हुन्छ । आउनुहोस् अब हामी तपाईँलाई घरको कुन स्थानमा ग्रिनाइड लगाउन उपयुक्त हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छौँ । साधरणतया घरको पोर्च, गाडी पार्किङ क्षेत्रमा ग्रिनाइड लगाउन उपयुक्त मानिन्छ । दोस्रो, घरको सिँढी । घरको सिँढीमा तपाइ मार्बल पनि लगाउन सक्नुहुन्छ तर मार्बल लगाइसकेपछि त्यसलाई घोट्नुपर्ने हुँदा कुना कुनामा घोट्न समस्या हुन्छ । यही कारणले सिँढीमा ग्रिनाइड लगाउनु उत्तम हुन्छ । किनकि ग्रिनाइड बजार बाट किनेर ल्याउँदा पहिल्यै चिल्लो पारिएको हुन्छ र त्यसलाई तपाइ आफ्नो साइज अनुसार काटेर सिधै लगाउन सक्नुहुन्छ । लगाइसकेपछि त्यसलाई घोट्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । तर यसमा तपाइले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने यसको जोइन्ट भएको स्थानमा बराबरको लेबलमा जोइन्ट गर्नु पर्दछ । किनकि जोइन्ट थोरै मात्र तल माथि भयो भने त्यो खुट्टामा लाग्न सक्दछ । साथै त्यसको फिनिसिङ पनि राम्रो देखिँदैन । तर मार्बलमा भने लेबलमा तल माथि भएता पनि घोटेर एउटै लेबलमा ल्याउन सकिन्छ । तर ग्रिनाइडमा घोट्न नमिल्ने हुँदा लगाउँदा नै लेबल मिलाएर लगाउनु पर्ने हुन्छ ।
यदि तपाइ ग्रिनाइड खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने यसका बारेमा केही आधारभूत जानकारी हुन जरुरी हुन्छ । सबै भन्दा पहिलो कुरा त यसको मूल्य हो । यसको मूल्य मार्बलको तुलनामा महँगो हुन्छ । बजारमा यो विभिन्न रङ्गमा उपलब्ध हुन्छ । यसको रङ्गको यसको मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । जस्तो कि यसको सेतो, रोजी पिङ्क तथा हल्का रङको मूल्य कम पर्दछ भने गाढा कालो, खैरो, रातो रङ्गको मूल्य बढी पर्दछ । जुन कुनै रङको भएता पनि कडापन एउटै हुन्छ मात्र रङ्गको आधारमा मूल्य कम र धेरै पर्ने हुन्छ । तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ कि ज्वालामुखी विस्फोटबाट निस्केको लार्भा चिसो भई जमेको पत्थर वाट ग्रिनाइड बन्दछ । यो Quartz +Feldspar मिलेर ग्रिनाइड बन्दछ । यही कारणले गर्दा ग्रिनाइडमा एसिड वा केमिकल पर्दा कुनै असर पर्दैन । त्यस कारण हामी तपाईँलाई यो सल्लाह दिन्छौ कि किचनको स्लाब बनाउँदा ग्रिनाइड नै लगाउनुहोस् । यसमा कागतीको रस, भिनेगर, एसिड पर्दा असर गर्दैन ।
ग्रिनाइडमा एउटा सानो समस्या हुन्छ जसलाई तपाइले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो हो यसको चिल्लोपन । यसको कारणले सिँढीमा चिप्लने सम्भावना हुने हुँदा टेक्ने ठाउँमा डिजाइनदार ग्रिप बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । यसको अर्को बेफाइदा भनेको यो केही महँगो पत्थर हो । यसको सुरुवाती मूल्य जो कसैलाई मन नपर्न सक्दछ । किनकि सुरुवाती मूल्यका ग्रिनाइड हल्का रङ्गको हुने हुँदा जो कसैलाई यो मन नपर्न पनि सक्दछ । साथै तपाईँलाई मन पर्ने रङको मूल्य महँगो पर्दछ । आजकाल बजारमा व्यापारीहरूले धेरै नाफा कमाउन उद्देश्यले सस्तो रङ्गको मार्बलमा गाढा रङ लेपन गरेर बेच्ने गर्दछन् । तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि कम मूल्यमा गाढा रङको ग्रिनाइड पाए। तर त्यस किसिमको ग्रिनाइड केही समय पश्चात् त्यसको रङ्ग हराएर हल्का रङ्गमा परिणत हुन्छ । यहाँ हामीले तपाईँलाई नेचुरल रङ छुट्टाउने तरीका बताउँदै छौँ । जुन ग्रिनाइड नेचुरल रङको हुन्छ त्यसको अगाडी र पछाडिको रङ एउटै हुन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ग्रिनाइडको प्रकार हो । खरिद गर्दा यकिन हुनु पर्दछ कि त्यो राजस्थानको ग्रिनाइड हो या साउथको ग्रिनाइड हो ।
मार्बल चुन ढुङ्गाबाट बनेको पत्थर हो । यसको कडापन Mohs Hardness Scale मा ३ देखि ५ को बिचमा हुन्छ । यसबाट थाहा हुन्छ कि ग्रिनाइड र मार्बल कुनमा बढी कडापन हुन्छ । यसको अर्थ यो हो कि ग्रिनाइडको तुलना मार्बल कम कडा हुन्छ । आउनुहोस् अब मार्बल कहाँ कहाँ लगाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ । यो पनि ग्रिनाइड जस्तै प्राकृतिक पत्थर हो । तर यो चिसो हुन्छ । तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि यो चिसो किन हुन्छ ? किनकि यो चुन ढुङ्गाबाट बनेको हुँदा यसले चिसोपन रोकेर राख्दछ । यसै कारणले गर्दा गर्मी हुने स्थानमा मार्बल लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
मार्बल प्राकृतिक ढुङ्गाबाट बनेको हुँदा जुन स्थानमा लगाइन्छ त्यो भाग आकर्षक देखिन्छ । मार्बल किन्दा तपाईँलाई मन पर्ने रङ छनोट गरेर लगाउनुहुन्छ । तर त्यसलाई घोट्दा अर्कै रङको बन्न जान्छ । त्यस कारण तपाइ मार्बल किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने मार्बल सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको व्यक्तिलाई सँगै जानु उपयुक्त हुन्छ । मार्बलको मूल्यको अवस्था हेर्ने हो भने ग्रिनाइडको तुलना कम मूल्यमा पाइन्छ । यसको मूल्य ग्रिनाइडको भन्दा उल्टो हुन्छ अर्थात् गाढा रङको ग्रिनाइडको मूल्य महँगो हुन्छ भने गाढा रङ्गको मार्बलको कम मूल्य हुन्छ । त्यस्तै हल्का वा सेतो रङको मूल्य महँगो हुन्छ । मार्बलको गुणस्तरको चर्चा गर्दा यसमा चाँडो फोहर देखिने, कोरिने हुन्छ भने लगाउनका लागि पनि धेरै समय लाग्ने हुन्छ । किनकि मार्बल लगाइसकेपछि घोट्न पनि त्यत्तिकै समय लाग्दछ । मार्बलको अर्को नकारात्मक पक्ष भनेको यसमा एसिड, भिनेगर, तेल पर्‍यो भने यसमा प्रतिक्रिया भएर दाग बस्दछ । यसको अर्को पक्ष कोरिएको दाग लागेको स्थानमा पुनः घोटी नयाँ र चम्किलो बनाउन सकिन्छ तर बारम्बार घोट्नका लागि समस्या हुन सक्दछ । यदि तपाइको घरको स्थानमा १२ महिना नै चिसो हुन्छ भने त्यस स्थानमा यो लगाउन उपयुक्त हुँदैन ।
बजारमा धेरै प्रकारका टाइलहरू पाइन्छन् । जस्तो कि सेरामीक टाइल, पोर्सिलेन टाइल, सिमेन्ट टाइल, मार्बल टाइल, ग्लास टाइल आदि । त्यस भित्र पनि सिङ्गल चार्जर, डबल चार्जर , फुल बडी । टाइल निश्चित तापक्रममा पकाएर निर्माण गरिन्छ । यसलाई पकाउँदा धेरै मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड वातावरणमा फैलिन्छ । यो हाम्रो पर्यावरणको लागि राम्रो होइन । टाइलको कडापनको तुलना गर्दा टाइल प्रकाश पर्ने कोठामा लगाउँदा यसले कोठाको तापक्रम बढाउने गर्दछ । यसको मुख्य फाइदाको चर्चा गर्दा यो निकै कम समयमा धरै स्थानमा लगाउन सकिन्छ । तपाइले मार्बल लगाउनुभयो भने त्यसले धेरै लिने गर्दछ । चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि आजकाल टाइलको प्रयोग धेरै मात्रामा गर्ने गरिन्छ । मानै यदि तपाइ आफ्नो कोठामा तपाईँलाई मन परेको टाइल लगाउनु भयो ३, ४ वर्ष पछि कुनै यौटा भाग चर्कियो र त्यसलाई बदल्न खोज्नुभयो भने त्यो बजारमा उपलब्ध नहुन सक्छ किनकि टाइल कम्पनीले त्यस किसिमको टाइल उत्पादन बन्द गरिसकेको हुन सक्दछ, यस्तो अवस्थामा तपाइले सबै टाइललाई निकाली नयाँ टाइल लगाउनु पर्ने हुन्छ । यो यसको अर्को बेफाइदा हो । अव लागौँ यसको मूल्य तर्फ । यो मार्बलको तुलना कम मूल्यमा बजारमा पाइन्छ । तर मूल्य टाइलको प्रकार र आकारमा भर पर्दछ ।